Tantaran'ny teknolojia manakorontana amin'ny marketing | Martech Zone
Rehefa nivoatra ny mpampita fifandraisana ary namboarina ny haitao vaovao, nianjera indostrialy maro izy ireo ary nipoaka vaovao hanoloana azy ireo. Ity infographic ity dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa teo amin'i Eloqua ary Jess3, mamakivaky antsika amin'ny tantara sy ireo hetsika marobe izay nahatonga ny fiovan'ny mpivarotra.
Tantaran'ny fanavaozana manakorontana ao amin'ny B2B Marketing dia mijery ny haitao fandrosoana sy ny fizotrany izay nanova mandrakizay ny ampahan'izao tontolo izao: ny fiainan'ireo matihanina amin'ny marketing B2B.
Ny fandinihana ny tantara dia mahaliana eo amin'ny sehatry ny indostria… indrindra satria toa nitombo ny taham-panovana fa tsy nihena. Zahao ireto infografika hafa itadiavantsika tantara ireto: Tantaran'ny Web Analytics, Tantaran'ny doka, Tantaran'ny mailaka, Tantaran'ny fandefasana hafatra an-tsoratra, ary ny Tantaran'ny telefaona finday.
Tags: tantaratantaram-barotratantaran'ny teknolojiaSary torohayzava-baovaoteknolojia marketing
Janoary 17, 2012 amin'ny 12:27 PM
Ity dia "infografika" somary malemy. Zara raha latabatra izy io, ary be mponina amin'ny zavatra tsy mifandray lavitra amin'ny lohateny hoe “Tantaran'ny fanavaozana manakorontana amin'ny varotra B2B”. Ny maha-vaovao dia tsy mahatonga zavatra “manakorontana”. Tsy misy fanazavana na fahatakarana ny antony mahatonga ny zava-baovao ho fanelingelenana ny varotra b2b.
Ny PC IBM, ohatra, dia tena nanakorontana. Saingy izany dia notarihin'ny filàna hery informatika izay mora azon'ny besinimaro sy ny fampiasana manokana ny takelaka, izay tamin'ny fiandohan'ny taona 80 dia trangan-kaontim-bola fa tsy varotra. Nanelingelina izany satria mora, mora, mora azo (mizara kokoa), raha tsy dia matanjaka sy stratejika noho (izany hoe ambany noho ny) teo aloha. Izy io koa dia niorina tamin'ny maritrano misokatra mifanohitra amin'ny fananana. Ny rindrambaiko fanodinana teny sy famelabelarana amin'ny PC dia tsy nanjary nanan-danja raha tsy taty aoriana kely, izay efa nitrangan'ny fanakorontanana, ary azo lazaina fa tsy misy amin'izy ireo manokana ny "fanakorontanana ara-barotra", ary azo antoka fa tsy "fanavaozana ara-barotra b2b".
Mampihetsi-po ahy ho toy ny blather sy hype be loatra izany - miezaka mametaka teny iray izay lasa lamaody, ary avy eo dia manondro fotsiny ny dikany ary tsy miraharaha ny dikany. Tena nanantena aho fa hanome fanazavana momba ny fomba nanovan'ny teknolojia samihafa na nanamafy ny varotra, fampihenana ny vidiny sy fampitomboana ny fahombiazany, ary nahoana no tena nanakorontana ny fiovana (ary noho izany dia tsy azo ovana). Ny hany nataonao teto dia manome karazana fandaharam-potoana ho an'ny fanavaozana lehibe miharihary tsy misy contexte, ary fiara iray ho an'i Eloqua hanao dokambarotra ny tenany ary hilaza fa manelingelina (izay tsy izy).